डा. कुमुद धिताल :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
अष्ट्रेलियाको सेन्ट भिन्सेन्ट अस्पतालमा कार्यरत नेपाली डाक्टर कुमुद धितालले मृत ब्यक्तिको मुटुको सफल प्रत्यारोपण गरेर विश्वव्यापी ख्याती कमाएका छन् । डा. धितालले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै यो शल्याक्रियाले चिकित्सा बिज्ञानमा नयाँ आयाम र उत्साह थपिदिएको बताएका छन् ।
यससँगै उनले नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा नेपालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चाहना ब्यक्त गरेका छन् ।
विगत ५ बर्षदेखि अष्ट्रेलियामा रहेर मुटु प्रत्यारोपण गर्दै आएका डा. धिताल सहितको टोलीले केही समयअघि मृत ब्यक्तिको मुटु अर्का बिरामीमा प्रत्यारोपण गरेर आश्चर्यजनक सफलता हात पारेका हुन् । यसभन्दा पहिले 'बे्रन डेथ' दिमाग मरिसकेका ब्यक्तिको मुटुमात्र प्रत्यारोपण गर्न सकिन्थ्यो भने अब मृत घोषित भइसकेका ब्यक्तिहरुको मुटूसमेत प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
सफलता हात पारिसकेपछि एकाएक चर्चामा आएका डा. धितालले यो नयाँ सफलताले मुटुका रोगीहरुका लागि नयाँ जीवन जिउने बाटो खोलिदिएको बताए । त्यससँगै उनले नेपाल सरकारले चाहेमा आफू यसै क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको समेत जानकारी दिएका छन् । उनले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले यस क्षेत्रमा कुनै किसिमको सहयोग र सुझावको अपेक्षा राख्छ भने आफु सदैव तयार रहेको बताए ।
आजभन्दा पहिले बे्रन डेथ अर्थात् दिमागको मृत्यु भइसकेका ब्यक्तिको मात्र मुटु प्रत्यारोपण हुँदै आएकोमा उनको टोलीले मृत घोषित ब्यक्तिको मुटु यहाँका तीनजना बिरामीमा सफल प्रत्यारोपण गरेको छ । डा. धितालले दिएको जानकारी अनुसार सेन्ट भिन्सेन्ट अस्पतालमा कार्यरत प्रोफेसर डा. पिटर म्याकडोनाल्ड र उनले नेतृत्व गरेको टोलीले यो कार्यको सफलता प्राप्त गरेको हो । 'यो रिसर्चमा सफलता पाउनका लागि केही पिएचडी विद्यार्थीहरुसहित करिव १ दर्जन विशेषज्ञहरुको हात रहेको छ,' अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्सका एसोसिएट प्रोफेसर समेत रहेका डा. धितालले भने । तर पनि पहिलो चरणमा गरिएका ३ वटै मुटुको प्रत्यारोपण भने उनी आँफैले गरेका थिए ।
उनको यो सफल परीक्षणलाई भिक्टर चाङ्ग कार्डियाक रिसर्च इन्स्टिच्यूटले सघाएको थियो । उनले दिएको जानकारी अनुसार यसप्रकारको प्रयोग सुरुमा सुँगुरलाई गरिएको थियो भने त्यसपछि बिस्तारित रुपमा मानिसमा गरिएको हो । सोही प्रयोगद्वारा उनले अहिलेसम्म ३ जना बिरामीको मुटुको सफल प्रत्यारोपण गरिसकेका छन् ।
पहिलोपटक मुटु प्रत्यारोपण गरिएकी मिसेल गि्रबिलास ३ महिनाअघि नै घर फर्किएर सामान्य जीवन जिउन थालिसकेकी छिन् भने दोस्रो पटक मुटु प्रत्यारोपण गरिएका जेन डामेन केही दिनमा नै डिस्चार्ज हुने उनले जानकारी दिए । उनले मुटु प्रत्यारोपण गरेका अर्का बिरामीलाई भने अहिले भेन्टिलेटरबाट झिकिसकिएको र उनी पनि केही समयमा नै स्वस्थ भएर घर फर्किन सक्ने बताए ।
यो उपचार पद्दति भने महङ्गो रहेको र सामान्य ब्यक्तिहरुले प्रयोग गर्न सम्भव नहुने देखिएको छ । डा. धितालका अनुसार मृत ब्यक्तिको मुटु राख्नेसुरक्षित मेसिनलाई मात्र करिब ३५ हजार डलर पर्छ । जुन एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि अन्तरगत उक्त मेसिनमा अधिकतम ६ घण्टासम्म मृत ब्यक्तिको मुटु राखेर आफूले चाहेको अवस्थामा सुरक्षित किसिमले लैजान मिल्छ ।
मृत घोषित भइसकेका ब्यक्तिको मुटु ३० मिनेट भित्रै उक्त सुरक्षित मेसिनमा राखिसक्नुपर्छ । उक्त मेसिनमा राखिसकेपछि मुटु चलाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र मुटुले काम गर्न थालेपछि बिरामीमा प्रत्यारोपण गरिन्छ । उनका अनुसार यो उपचार पद्दति अहिलेसम्म अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिका बाहेक कुनैपनि देशमा उपलब्द्ध भइसकेको छैन् ।
यो सफल परीक्षणले मुटुको दान गर्नेहरुका लागि समेत नयाँ आयाम थपिदिएको उनले बताए । यो सेवालाई अन्य क्षेत्रहरुमा लैजानका लागि समेत छलफल सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । 'अहिलेको अवस्थामा चीन र भारतमा यो सेवा विस्तार गर्नका लागि छलफल सुरु भइसकेको छ,' उनले भने, 'यदि भारतसम्म पुग्यो भने नेपालीहरुलाई यो सेवा लिन सहज हुनेछ ।'
लण्डनमा रहन्दा त्यहाँस्थित नेपाली संस्था यतिको अध्यक्ष समेत रहिसकेका डा. धितालले आफू नेपाली भएकाले समेत नेपाल सरकार वा कुनै सम्बन्धित निकायले चाहेमा आफ्नो सीप र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । नेपालमा अहिल्यै यस्तो उपचार पद्दतिको सुरुवात गर्न नसकिएपनि भविष्यमा भने यसको सम्भावना रहेको उनले औल्याए ।
उनले बिशेष गरेर सम्बन्धित देशहरुमा रहेका नेपाली दुतावास र सम्बन्धित निकायले नेपाली बिशेषज्ञहरुको पहिचान गरेर उनीहरुको सीप र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति : २०७१ कार्तिक ०९ (October 26, 2014)